Shaqaalaha Dowladda oo la fasxay | KEYDMEDIA ONLINE
Shaqaalaha Dowladda oo la fasxay
Dowladda Fadaraalka Soomaaliya ayaa fasaxday inta badan shaqaalaha Dowladda kadib soo laba kacleynta cudurka faafa ee COVID-19.
MUQDISHO, Soomaaliya - Qoraal ka soo baxay Wasiirka Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya ayaa lagu amray dhamaan hay’adaha Dowladda in ay goobaha shaqada ka fasaxaan shaqaalaha intooda badan si loo yareeyo khatarta cudurka COVID-19.
Warka ka soo baxay Wasaaradda Shaqada aya la sheegay in shaqaalaha caadiga ah ay guryahooda ku shaqeeyaan iyaga oo adeegsana aaladda Internet-ka, agaasimayasha muhiim-ka ah ee aan laga maarminna yimaadaan xarumaa shaqada.
“Wasaaraddu waxay ogeysiineysaa dhamaan hay’adaha dowladda laga billaabo 16/2/2021 in shaqaalaha la yareeyo isku imaadkooda kuna shaqeyaan guryahooda iyagoo adeegsanaya barahooda mareegta Internet-ka, sidoo kale agaasimayaasha iyo intii aan laga maarminna yimaadaan goobaha shaqada, si loo yareeyo faafidda cudurka”. Ayaa lagu yiri waraaqda ka soo baxaday xaafiiska wasiir Duraan.
Shaqaalaha dowladda waxaa lagu amray in ka dheeraadan salaanta gacan qaad ah, sidoo kale xirashada Af-xirka ‘Mask’ ayaa lagula balamay, isticmaalka dareeraha gacmaha lagu nadiifiyo iyo haddii ay heli karaan gacmo gashi ayaa lagu booriyay.
Cudurka saf marka ah ee COVID-19 aya si xooggan ugu soo laabtay dalka iyo dunida oo dhan, sanad ka hor bishaan oo kale ayayna ahyd markii uu si xooggan ugu faafay gayiga Soomaalida.